Fri, Mar 22, 2019 | 12:49:22 NST
अर्घाखाँची, माघ १५ – अर्घाखाँचीको डिभर्ना बोयर जातका बाख्रा उत्पादन स्थल बन्दैछ ।
​माटोमा खेलेरै घरघडेरी
पढ्दापढ्दै १८ वर्षको उमेरदेखि नै कृषि पेशामा लाग्नुभएका चन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले १९ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी, केरा, फलफूल र माछापालन गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं, माघ १४ – काठमाडौं उपत्यकाको आज न्यूनतम तापक्रम घटेर २.३ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । न्यूनतम तापक्रम घटे पनि तुलनात्मक रुपमा चिसो कम हुँदै जाने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौं, माघ १४ –अाइतबार देशभरी नै चिसो बढेको छ ।
दाङ, माघ १३ – कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जिल्लामा करिब रु ८० करोड लगानी भएको छ ।
काठमाडौं, माघ १३ – वातावरण मैत्री समाजले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर चारमा सरसफाइ गरेको छ ।
माघ १२ बझाङ – लामो समय विदेशमा विताएका बझाङका गजेन्द्र ओली अहिले अर्गानिक तरकारी खेती आकर्षित हुनुभएको छ ।
धानको उत्पादन बढाउन फिलिपिन्सबाट ‘सोलार बबल ड्राएर’ मेशिन ल्याइयो
काठमाडौं, माघ ११ – नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले ‘सोलार बबल ड्रायर’ अर्थात भिजेको तथा बढी चिस्यान भएको अन्नबाली सुकाउने मेशिन ल्याएको छ ।
जनकपुरधाम, माघ ११ –धनुषाको वनबाट घाइते अजिङ्गरको उद्धार गरिएको छ ।
​माघे झरीपछि चिसो बढ्यो
काठमाडाैं, माघ ११ -काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरी नै आज चिसो बढेको छ ।
मौसमविदको अनुमान मिल्यो, पश्चिम र मध्य हुँदै झरी पूर्वतिर (फोटो फिचर)
काठमाडौं माघ १० – बुधबार पानी पर्छ भनेर मौसमविदले तीन दिनअघि नै भविष्यवाणी गरेका थिए ।
मनाङमा एक फिटसम्म हिउँ, पर्यटक अलपत्र
मनाङ, माघ १० – मनाङका हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । मनाङमा एक फिट हिउँ जमेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
हिउँदको पहिलो वर्षा : कुन कुन बालीलाई फाइदा ?
काठमाडौं, माघ १० – बुधबार काठमाडौं उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ ।
​घरको छाना र गाउँवस्ती हिउँले सेताम्य (तस्बिर सहित)
जुम्ला, माघ १० – हिमाली जिल्ला जुम्लामा मंगलबार रातीदेखि हिमपात भएको छ ।
काठमाडौंमा पानी पर्न थाल्यो, पश्चिमी भेगमा जमिन भिज्ने गरी नै वर्षा हुने
काठमाडौं, माघ १० – काठमाडौं उपत्यकामा पानी पर्न थालेको छ । यो वर्षको हिउँद लागेपछि पहिलो पटक जमिन भिज्ने गरी पानी पर्न लागेको मौसमविदले बताएका छन् ।
सिरहा, माघ ९ – एकमहिना भन्दा लामो समयदेखि लगातार चलेको शितलहर र बक्लो हुस्सुको कारण सिरहामा तरकारीको मूल्य अकासिएको छ ।
चितवन, माघ ९ – चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा अझ बढी सक्रिय बन्दै गएको छ । निकुञ्जले सन् २०१७ प्रजाती संरक्षणका लागि निकै महत्वपूर्ण भएको बताएको छ ।
चितवन, माघ ८ –चितवनको सिमसार क्षेत्रमा गरिएको चरा गणनामा ६ प्रजातिका चरा घटेको पाइएको छ ।
काठमाडौं, माघ ८ – जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजभोलि नै पानी पर्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं, माघ ७ – उपत्यकासहितका शहरमा खुला रुपमा आगो बाल्न नपाइने भएको छ ।
खोटाङ, माघ ४ – खोटाङको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ ।
गुल्मी, माघ २ – गुल्मीमा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ । जिल्लामा यस वर्ष २ हजार २ सय ५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ ।
काठमाडौं, माघ २ – पुसको अन्तिम साता ह्वात्तै बढेको चिसो माघ महिना लागेसँगै घटेको छ । अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा बृद्धि आएपछि उपत्यका तातो बन्दै गएको छ । उपत्यकामा पुसको अन्तिम साता न्युनतम तापक्रम शून्य डिग्रीमा झरेको थियो ।
​विषादीको कारण मौरी मर्न थालेपछि सर्लाहीका मौरीपालक किसान मर्कामा
सलाही, पुस ३० -तोरीमा लाग्ने लाइकीरा मार्न प्रयोग गरिएको रसायनिक विषादीको प्रयोगबाट सर्लाहीमा धमाधम मौरी मर्न थालेको छ।
प्रकाश धौलाकोटी/उज्यालो । तेह्रथुम, पुस ३० – सरकारले अलैँची खेतीको विकास, विस्तार र बजारीकरणका लागि छलफलमा रहेको अलैँची नीतिलाई तत्काल लागु गर्नुपर्ने व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । शून्य आयातमा रहेको अलैँची खेतीलाई थप बढावा दिने उद्धेश्यले सरकारले अलैँची नीति ल्याउने तयारी थालेको वर्षौँ बितेपनि अहिलेसम्म नीति लागु नभएकोप्रति व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
​जस्टिन बिबरले पालेको बाँदर अहिले पनि तर्सिरहन्छ !
पुस २८ –चर्चित क्यानेडियन पपस्टार जस्टिन बिबरले अवैधानिक रुपमा पालेको बाँदर अझसम्म पनि पूर्ण रुपमा निको नभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकै अध्यक्षको काठ मिलमा भेटियो अवैध काठ
उदयपुर, पुस २८ – उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षको काठ मिलबाट ठूलो परिमाणमा अवैध काठ बरामद भएको छ ।
काठमाडौं, पुस २८ – अहिले पश्चिमी क्षेत्रको मौसम बदली भएको छ । तराईमा बाक्लो हुस्सु लागेको छ । अरु ठाउँको मौसम भने सामान्यतया सफा छ ।
एकै दिन २६ बाख्रा मरे, तीन लाखको नोक्सान
इलाम , पुस २७ –इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका –५, सोयाङ्गमा मंगलबार एकै पटक २६ बाख्रा मरेका छन् ।
भेडापालक किसानकाे मर्म : सातदिन भेडा चराएको मूल्य २५ देखि ३० हजारसम्म
बझाङ, पुस २५ – हिमाली भेगमा हिमपातसँगै बढेको चिसाले बझाङमा भेडा पाल्नेहरु बेसी झरेका छन् ।
काठमाडौं, पुस २५ – चिसो बढेसँगै उपत्यकाको प्रदूषण बढेको छ । उपत्यकामा दिउँसोको तुलनामा बिहान र बेलुका धुवाँधुलो बढी हुने गरेको छ । जाडो भएपछि बिहान र बेलुकाको समयमा प्लाष्टिक बाल्ने, दाउरा बाल्ने र आगो ताप्ने गरेपछि प्रदुषणको मात्रा बढेको हो ।
पर्वतको लिमीठानामा घाइते चितुवा फेला
पर्वत, पुस २४ – पर्वतको फलेवास नगरपालिका –७ लिमीठानामा घाइते अवस्थामा चितुवा फेला परेको छ ।
अब तापक्रम बढ्दै जान्छ : मौसमविद
काठमाडौं, पुस २५ – काठमाडौंसहित देशभरि नै अब ताक्रम बढ्दै जाने मौसमविदले अनुमान गरेका छन् । अबको केही दिन देशभरि कै मौसम सफा रहने भएकाले जमिनको ताप आकाशमा बहने र हावा चल्ने हुँदा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने देखिएको मौसमविद समिर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अर्घाखाँची, पुस २४ –अर्घाखाँचीको पाणीनी गाँउपालिका वडा नम्बर–१, पणेना सिम्लेका कृषकहरुले सुन्तला खेतीको विमा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।